घर युरोपियन स्टार यसका लागी एक अर्काको भनाई छ
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नामले उपनाम "अधिकतम"। हाम्रो अधिकतम एरन्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पुरा खाता ले आफ्नो बचपन को समय सम्म पूरा गर्दछ।
एकैछिनमा उनीहरुसँग भेटघाट गर्थे
विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा / क्यारियर बिल्डअप, प्रारम्भिक क्यामेरा जीवन, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवनको कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन, जीवन शैली आदि वृद्धि गर्न समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि म्याक्स एरोन्स इङ्गल्याण्डका सबै भन्दा राम्रो आधुनिक चौडा रक्षकहरू मध्ये एक हो, जसले केवल फ्यानहरूलाई सुरक्षा गर्न भन्दा बढी गर्न सक्छ। उहाँ कोही हुनुहुन्छ जसमा 18 / 19 मौसममा ईएफएल सिजनले उनको हस्ताक्षरको लागि घुँडामा राख्नु पर्ने प्रमुख प्राइम लीग शीर्ष क्लबहरू हेर्छन्। यद्यपि, केवल केहि कम माक्स एरोन्स जीवनी जो काफी रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
मैक्स एरन्स बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, उहाँका पूरा नामहरू छन्; मैक्सिमिलियन जेम्स एरोन्स। अधिकतम, जसलाई उहाँ लोकप्रिय भनिन्छ, केवल एक उपनाम हो। मैक्स एरन्स जनवरी4को 2000th दिन मा उनको नदी, माइक एरोन्स र मां (लन्डन को नाम मा अज्ञात नाम) लाई लन्डन, यूनाइटेड किंगडम, लन्डनमिथि, लन्डन मा जन्म दिए।
आफ्नो पारिवारिक मूलको सन्दर्भमा, मैक्स एरोन्स अंग्रेजी र जमैकन जडहरूमा बहु बहुसंख्यक परिवारबाट जोगिन्छ। माक्स हारूनको आमाबाबु मध्ये एक (तिनको पिता) किंग्स्टन, जमैकाको हो भने उनको मामले इङ्गल्याण्डबाट मेल खान्छ। रोमान्टिक बहु-नैतिक प्रेम प्रेम प्रेम पक्षहरू र हाम्रो प्यारी प्यारी मैक्स बीचको उत्पादन भयो।
शुरुमा, मैक्स एरोन्सले फुटबल-मायालु परिवारमा आफूलाई आफूलाई बढ्दै गयो, जसले आफ्नो बुबाको पक्षबाट उत्पन्न गर्यो। एक फुटबल-मायालु परिवार भएको, यो सुन्दर गेमको लागि अधिकतममा अधिकतम लागी मात्र प्राकृतिक थियो। एक केटाको रूपमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवनमा, म्याक्सले आफ्नो चचेरा रोलोडोरो एरोन्ससँग खेल खेल्न थाले जुन सामान्यतया ब्रिस्टलबाट आफ्ना आमाबाबुसँग यात्रा गर्न मिल्टन केन्समा आफ्नो परिवारको भ्रमण गर्न आए।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
मिल्टन केनेन्स बढ्दै गर्दा, सबै अधिकतम चाहना पेशेवर फुटबलर बन्ने र डाक्टर वा इन्जिनियर हुनुहुन्न। पहिला, तिनका आमाबाबुले उनीहरूको प्रिय पुत्रलाई आफ्नो शिक्षा फुटबल प्रशिक्षणको लागि सम्झौता गर्दैनन्। तिनीहरूले मिल्टन किनेनको पश्चिमी किनारमा एक आधुनिक माध्यमिक एकेडेमी स्कूल शेन्ले ब्रुक अन्त विद्यालयमा नामांकन गर्न निर्णय गरे।
अधिकतम एरन्स शिक्षा प्लस क्यारियर बिल्डअप.jpg
जबकि स्कूलमा, मैक्स एरोन्स आमाबाबुहरूले खेलकुदमा आफ्नो छोराको उच्च ऊर्जा स्तरको प्रशंसा गरे जसले स्कूलको फुटबल सहभागिता पछि उनीहरूको छोराको समर्थन गरे। वास्तव मा, मैक्स को पिता माइक एरोन्स उनको एक विशाल प्रशंसक थिए।
आफ्नो प्राथमिक शिक्षाको प्रमुख चरणहरू समाप्त भएपछि, म्याकलाई फुटबल परीक्षणमा भाग लिन अनुमति दिइएको थियो। वर्ष 2009 एरोन्स परिवारको लागि एक निश्चित क्षण थियो। यो म्याक्स दुवै वर्ष मैक्स र उनको चचेरे भाई ब्रिस्टल र लटन टाउन मा अकादमिक परीक्षणहरुको लागि रंग उडान मा बाहिर आई।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जब उनको चचेरे भाई ब्रिस्टल गए, फुटबल को लागि मैक्स एरोन्स जुनून ले उनको परीक्षण र उनको लुटन टाउन एफसी को युवा क्षेत्र संग नामांकन को रूप ले गयो, जसले मंच को आफ्नो कैरियर को आधार बनाए।
मैक्स एरोन्स प्रारम्भिक जीवन लुटन टाउन एफसी संग। ट्विटरमा क्रेडिट
प्रत्येक बच्चा जो खेल मनपर्ने लागि, एक अकादमीमा सामेल हुन उनीहरूको सपना हो। सामेल हुँदा, अक्सिको लागि मजेदार थियो जो अकादमी को आफ्नो उत्साह यात्रा मा आफ्नो मित्र संग मिलेर शामिल हुनेछ।
के तपाईलाई थाहा छ? ... त्यहाँ धेरै समय हुँदा म्याक्सले जन्मदिन पार्टनरहरूलाई मिस गर्न थालिन् वा चीजहरू आफ्नो क्यारियरको प्रतिज्ञाको कारण सबै परिवारको घरमा फर्केर हेर्दै थिए। तर फ्लिप पक्षमा, उनले वास्तवमा उनीहरूको फुटबलको आनन्द उठाउँथे।
अधिकतम एरन्स प्रारम्भिक करियर लाइफ। ट्विटरमा क्रेडिट
शुरुमा, म्याक्सले आफ्नो क्लबसँग प्रभाव पारेका थिए, उनीहरूलाई 2009 अविश्वसनीय ट्राफी- युरोपियन च्याम्पियनशिप तल चित्रित त्यसपछि उसले5वर्ष अकादमी संग बिताउन सक्यो, सुर्खेत प्रगति गर्न र रैंक्सहरू छिट्टै बढ्दै गयो।
मैक्स एरोन्स प्रारम्भिक जीवन स्टोरी
तपाईंलाई थाँहा थियो?… अकादमी संग रहन को समयमा, मैक्स Tottenham, नर्वेच र QPR मा परीक्षा को लागि आमंत्रित गरियो, एक प्रमाण को रूप मा उनको व्यापार मा राम्रो थियो।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि कथा
वर्ष 2014 ले एक रोमांचक म्याकस को सफल परीक्षण पछि नॉर्विच मा उनको फुटबलिंग परिपक्वता प्रक्रिया जारी राखयो।
शुरुमा, एक्सएनएमएक्सएक्स वर्षकी युवतीले त्यस युवा प्रशिक्षकहरूलाई आफ्नो एरोबिक क्षमताको साथ मैदानमा र प्रशिक्षणको समयमा प्रभावित गरे।
माघ 19बुट कक्ष
यो सुविधाले अधिकतम क्लबको साथ एक पेशेवर अनुबंध कमाएको थियो, ठूलो क्षमता र उत्कृष्ट मनोवृत्ति संग अविश्वसनीय रूप देखि कडा मेहनती फुटबलर को लागि एक महान इनाम। पेशेवर फुटबलको एक वर्ष पछि, मैक्सको प्रदर्शनले फेरि नॉर्वेच सिटी पहिलो टोलीको बिरोध गर्यो र सेप्टेम्बर 19 मा इंग्लैंड अन्त-एक्सएनक्सएक्स टोलीलाई कल-अप कमाई।
त्यस पलबाट, अधिकतम थाहा थियो कि त्यो धेरै माथि बनाउन को लागी किस्मत थियो।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
2018 / 2019 सीजन देख्यो कि मैक्स एरोन्स ईएफएल मा आफ्नो स्थिति मा सर्वश्रेष्ठ हुन सक्छ। त्यो सिजन, उनले आफ्नो टोलीलाई च्याम्पियन च्याम्पियन टेबलमा जित्न र ईएफएल ट्राफिकलाई जित्ने मद्दत पुर्याए जो प्रीमियर लीग रिटर्नको ग्यारेन्टी पाएको थियो।
अधिकतम एरन्स - 2018-2019 च्याम्पियनशिप मनाउने। क्रेडिट 90Min
एसिड च्याम्पियनशिप जित्न मद्दत गर्न, हारून ईएफएल युवा युवा खेलाडी (2018-2019), सीईएफ टीमको सीजन (2018-2019) र पीएफए ​​टीम (2018-19) जित्न सफल भयो।
अधिकतम एरन्स EFL उपलब्धि। ट्विटरमा क्रेडिट
2019-2020 गर्मीको सर्भिस विण्डोमा, एरोन वान-बिसाकामा उनीहरूको चासो ठुलो हुँदा एरोनले म्यानचेस्टर युनाइटेडको लागि लक्ष्यको रूपमा देखाए। लेखन को समयमा, अन्य शीर्ष क्लबहरू उनको पछि लागेका छन्।
अलमलमा पुग्ने र सहयोग गर्न कसैको लागि, यो प्रायः सम्भव छ कि म्याक्स चाँडै भविष्यमा चाँडो एक ठूलो क्लबको लागि खेल्नेछ। यो समयको मात्र हो। विश्राम, तिनीहरू जस्तै, अब इतिहास छ.
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
लेखनको समय मैक्स एरोन्स उमेर पुगिसकेको छ जहाँ उनी डेटिङको लागी योग्य हुनुहुन्छ र प्रेमिका हुन्थे। उनको प्रसिद्धिको कारण, यो निश्चित छ कि प्रशंसकहरू विशेषतया महिलाहरूले प्रश्न सोध्थे; अधिकतम हारूनको प्रेमिका को हो?.
अधिकतम एरन्स सम्बन्धी जीवन
तथापि कुनै तथ्यहरू इन्कार गर्न सकिँदैन कि म्याक्स हारूनको सुन्दरताले उनको प्रसिद्धिको साथ युग्मन लगाउँदछ जुन उनीहरूलाई प्यारी दाखलाई महिलाहरूलाई बनाउँदैन।
लेखनको समयमा, त्यहाँ मैक्सको लागि सम्भवतया लुकेको रोमाञ्चक हुन सक्छ, जसले सार्वजनिक आँखाको जाँच मात्र बचाउँछ किनभने उसको प्रेमिकासँग प्रेम प्रेम निजी र सम्भवतः नाटक-मुक्त छ। अधिकतम छ आफ्नो क्यारियरमा फोकस मनपर्ने र आफ्नो निजी जीवनमा कुनै पनि रोचक बानी हटाउन खोजेको छ। यो तथ्यले हामीलाई हाम्रो प्रेम जीवन र डेटिङ इतिहास बारे तथ्यहरू राख्न गाह्रो बनाउँछ।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
अधिकतम एरन्स जान्न व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
अधिकतम एरन्स व्यक्तिगत जीवन। क्रेडिट FWk
फुटबलबाट टाढा, अधिकतम बुद्धिमानी, स्थिर र विश्वसनीय छ। उहाँ कसैको जीवन जसरी चीजहरू समय मा काम गर्दछन् र आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ।
मैक्स एरोनको सफलताको रहस्य यो तथ्य हो कि एक व्यक्ति को रूप मा, त्यो एक आन्तरिक राज्य को आन्तरिक राज्य छ, जसले उनको व्यक्तिगत र पेशेवर जीवन दुवै मा महत्वपूर्ण प्रगति को सक्षम गर्दछ। अधिकतम छ कि उनको जीवन र भलाई को लागि ठोस र यथार्थवादी योजनाहरु बनाउन को क्षमता छ।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - LifeStyle
लाखौं पाउन्डमा पैसा साँच्चै म्याक्स एरोन्सको लागि मूल्यवान हुन्छ र तिनको मेहनत र एक पेशेवर फुटबलर बन्न निर्णयको लागि धन्यवाद। लेखन को समयमा, मैक्स एरोन्स को एक जीवन शैली को जीवन जीने को अनुमति छैन जस्तै पागल जस्ता खर्च, विदेशी कारहरु किन्न वा आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्न।
अधिकतम एरन्स लाइफस्टीले तथ्यहरू। क्रेडिट दर्पण.
यद्यपि उहाँले ठूलो मोनिज बनाउन थालेका छन्, तर त्यो क्षणमा पारित हुँदैन एक ग्लैमरस जीवन शैली को लागि। आदर्श रूप मा, मैक्स मा आफ्नो फुटबल को धन को प्रबंधन को धेरै परेशानी छैन र बरसात दिन केहि को लागि बचत।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
इङ्गल्याण्ड र जमैका दुवैको उनको विशाल परिवारको समर्थनबाट मायाको लागि धन्यवाद, म्याक्सले आफ्नो विगतको र तिनको बचपनबाट सबै कुरालाई गहिरो जोड्दछ। वर्तमानमा मैले लेखेको रूपमा मैक्स एरोन्सको बहिनी, भाइ र आमाको बारेमा कुनै जानकारी छैन।
मैक्स एरोन्सका बुबा माइकल, जो उनको एक विशाल प्रशंसक हो जसले वर्षको उमेरमा आफ्नो छोराको आत्म-छविको विकासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। एरन्स परिवारको लोकप्रिय परिवारका नामहरू छन् जुन जमैकन-अङ्ग्रेजी पाङ्ग्राका साथ, जसले म्याक र उसको चक्कर रोलोडोको सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्।
अधिकतम एरन्स Cousin- Rolando एरोन्स। क्रेडिट प्रिमियर लिग
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्य
उहाँ फुटबलर एक 'बकवास' हुनुहुन्छ:
मैक्स एरोन्सको अर्को पक्ष। क्रेडिट पूर्वी एङ्ग्लियन डेली टाइम्स,SamfordCrimson News र पूर्वी दैनिक प्रेस
यद्यपि तपाईं आफ्नो गति मा अधिकतम अधिकतम र रक्षा र आक्रमण को कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। सायद, तपाईले उनीहरूको अर्को पक्ष थाहा पाउनुहुन्न। मैक्स एरोन्स फुटबलर हो जसले कुनै पनि प्रकारको 'बकवास' बाट बचाउँछ, खासकर ठूलो खेलाडिहरु जसले जो आफ्नो बाटोमा आउँछन्।
कहिलेकाँही, खेलाडीको भावनाले आफ्नो मनलाई परास्त गर्छ, क्रोध ट्रम्प्स तर्क जसले स्फल्स र मैदानमा झगडा ल्याउँछ। तर ईमानदार हुनुहोस्, प्रमुख लिग प्रशंसकहरूले एक पटक केही समयपछि बेग्लै जुनून प्रवाह हेर्न चाहानुहुन्छ।
अधिकतम एरन्स Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Max Aarons पढाइको लागि धन्यवाद बचपन स्टोरी र अनर्थ जीवनी तथ्य। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।